Wararka Maanta: Sabti, Feb 2 , 2013-MADAXWEYNAHA SOOMAALIYA: “Aqoonsiga Dowladda Soomaaliyeed heshay waa heybad iyo sharaf u soo hoyatay dadka Soomaaliyeed..."
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud iyo Marwadiisa Qamar Cali Cumar
Sabti, February 02, 2013(HOL): Waxaa goor dhaw ka billaabatay Hoolka Central Hall Westminster,xaflad si weyn loo soo qaabeeyay oo lagu soo dhaweynayo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud iyo wafdigiisa oo beryahan ku sugnaa magaalada London ee caasimadda dalka Britain.
Xafladda ayaa waxaa ka soo qeybgalay Soomaali kummanaan ah oo ku nool UK, kuwaasi oo hoolka uga soo xaariday in ay maamuus sarreeya u sameeyaan Madaxweynaha iyo wafdigiisa. Wafdiga Madaxweynaha waxaa ka mid ah R/Wasaare Ku Xigeenka, ahna Wasiirka arimaha dibadda iyo iskaashiga Caalimiga Marwo Fawziyo Yusuf Adan,Wasiiru-dowlaha madaxtooyadda Faarax Shiikh Cabdulqaadir, la-taliyayaasha Madaxweynaha, iyo saraakiil ka howlgash xafiiska Madaxweyaha Soomaaliya.
Ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaana ammaanka sugaya ciidamo gaar ah, kuwaasi oo sugaya amniga goobta iyo habsami u socodka xafladda, waxayna dadka u muuqdeen kuwo si weyn u daneynayay in ay arkaan madaxweynaha, isla markaana ay dhegeystaan hadalkiisa.
Caruur aad u da’ yar oo ku dhashay UK ayaa madaxweynaha ku soo dhaweeyay ubaxyo, qaarkoodna waxay goobta ka jeediyeen suugaan ay ku cabirayeen waxa ay ka doonayaan dowladda Soomaaliyeed iyo madaxdeeda
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Britain ayaa looga mahadceliyay xafladda ay soo agaasimeen, waxaana hadalkii jaaliyadda lagu sharfay Cabdi Cumar oo ka hadlay sidii isu howleen qabanqaabinta xafladda. Sidoo kalea waxaa loo mahadceliyay dhaliyarada dhaqdhaqaaqa la-dhagaallanka qabiilka ayaa iyana looga mahadceliyay kaalintii ay ku lahaayeen xafladda.
Cusmaa Jaamac Cali Kalluun ayaa ka hadlay xafladda wuxuuna sheegay in uu aad u faraxsan yahay, farxaddaasna ay ka keentay sida ay Soomaaliya tahay iyo sida caalamka la nooga doonayo, wuxuuna sheegay in Dowladda Soomaaliya u dhisan ay tahay mid tayo leh oo dadka ku jiraa ay yihiin dad aqoon leh. “Adduunka wixii ka dhex dhacay waa iska illoobay, annaga waan iska illoobeynaa, waddamada Afrikana annaga ayaa ugu horreyn doonna”ayuu yiri Cusmaan Kalluun oo intaas ku daray in aysan jirin dagaal dhexmari doona Soomaaliya iyo waddamada la deriska ah.
Xafladda waxaa heeso ka qaaday fannaaniinta London, gaar ahaan fannaanadda Hibaaq Maxamed Geel-qaad oo fursad u heshay in ay madaxweynaha hortiisa ka qaaddo heesteeda caan baxday ee Madaxweyne, taasi oo dadkii hoolka xaadirka ku ahaa ay aad ugu jidboodeen.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa ugu dambeyntii codbaahiyaha lagu soo dhaweeyay, wuxuuna ugu horreyn ka mahadceliyay soo dhaweyntii ay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK u sameeyay.
Intii uusan hadalkiisa billaabin ayuu madaxweynaha tacsi u diray Ummadda Soomaaliyeed oo uga tacsiyeeyay geeridii ku timid Suldaan Cabdi Cali Sokor oo ka mid ahaa odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed, kaasi oo Nairobi ku geeriyooday, laguna aasay magaalada Kismaayo.
“Intaas kaddib waxaan aad ugu faraxsanahay in aan idin soo hor-istaago, Soomaaliya dalkeenii war idinkuma seegana, waddadii dheereyd ee aan soo marnayna waad ogtihiin, waxaase rajeyneynaa in aan halkii saxda ahayd uga dhaqaaqno halka aan taagan nahay” ayuu yiri Madaxweynaha oo Alle ka baryay in aysan ku noqon dhowr sano kaddib halkii sanado ka hor laga dhaqaaqay.
Madaxweynaha oo sii hadlayay waxaa uu yiri “Sanadkii 2012 wuxuu ahaa sanad wanaag iyo xummaanba watay, wax xummaan ah wey dhaceen oo dhibaatooyin baa dhacay, wax wanaag ahna wey dhaceen oo waxaan helay dowlad oo aan ku dhisannay dalka gudahiisa.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud waxaa uu intaas ku daray in dowladda Soomaaliya tan iyo markii ay xilka la wareegtay ay howlo badan qabatay, wuxuuna tusaale u soo qaatay Baarlamaaka.
“Baarlamaanka Soomaaliyeed 46 kulan ayuu yeeshay tan iyo markii uu kalfadhigiisa furmay, howligii ugu horreeyay ee uu qabtayna isaga ayaa isnidaamiyay, isagoo ku dhinac waday barnaamijyadii ay xukuumadda horgeysay, kuwaasi oo uu ansiyay. Dad badan oo waxaa jira duruufihii lagu sugnaa 22kii sano dartood jecel in madaxda dowladda is-qabqabsadaan oo xukunka la isku khilaafo. Waxaan rabaa in aan hortiisa ka sheego Aniga, Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo Ra’iisal Wasaaraha waxaan ku heshiinnay in AAN isla riixno danta qaranka.
“Alle mahaddiis, maanta 22 sano kaddib waxaa heysannaa dowladd aan KMG ahayn, laakin dowladdan xitaa waxay qabaneysaa howlihii KMG ahaa waayo waxaa hortaalla in ay dalka u gudbiso dowlad xiriirrada ay caalamka la leedahay u sameysata sida dowladaha dhisan ee caalamka ka jira” ayuu hadalkiisa ku sii daray Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud.
Amniga ayuu sheegay in ay Dowladda Soomaaliya muhiimadda koowaad siineyso, “Qofka haddii uusan amnigiisa wel wel ka qabin ayuu ka fekeri karaa in uu shaqo aado oo uu raadsado wax uu cuno ama quutul-yoomkii, sidaas darteed ayaan go’aansannay in aan marka koowaad amiga wax ka qabanno, amni kaddib waxaa suurtagal ah in wax badan oo adduun iyo aakhiraba ah uu qofka u baahan yahay in uu sameysto”ayuu yiri Madaxweynaha oo sheegay in amniga tallaabta ku xigta ay tahay garsoorka waayo buu yiri haddii uusan garsoor jirin caddaalad ma imaaneyso. Kaddibna waxaa uu sheegay in qodobka seddexaad ay garteen in uu yahay la-dagaallanka musuq-maasuqa.
“Aniga, Ra’iisal Wasaaraha iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka ma lihin ciidan aan howsha ku qabanno balse waxaan dooneynaa in aan shacabka abaabulno oo wax kasta aan ku qabanno iyadoo dadka gacmaha is-heystaan. Sida aad la socotaan Muqdisho waxaa laga qaaday Isbaarooyin badan oo iyadoo aanu dhiig ku daadan. Sidoo kale Ciidamada Dowladda ayaa markii ugu horreysay xeryo looga sameynayaa Muqdisho, si ciidamada haddii aysan howl ku jirin ay xerada uga soo tagaan qoryahooda”ayuu yiri Madaxweynaha oo sugidda amniga ka hadlayay.
Doorka Beesha Caalamka ee Soomaaliya ayuu ka hadlay madaxweynaha, wuxuuna caddeeyay in beesha caalamka ay Soomaaliya taageereysay xilligii dowlad la’aanta, wuxuuna xusay in dad badan oo samafal u tegay Soomaaliya la laayay, wuxuuna ugu baaqay Soomaalida in aaney dhibaatada Soomaaliya u saarin dad kale balse ay Soomaalida mas’uuliyadda qaataan, isla markaana ay xalka si dhab ah u raadiyaan.
Dhalinyarada Shabaabka ku biirtay ayuu ka hadlay Madaxweynaha, wuxuuna u kala qaaday seddex qeybood oo kala ah: qeyb u gashay nolol, qeyb u gashay in ay ku aargoosato iyo koox mabda’ ahaan u galay oo laga dhaadhiciyay wax aan jirin, wuxuuna seddexba sheegay in ay yihiin dhalinyaro markii dowladdii hore dhaceysay jiray 5 illaa 10 sano.
"Wax kasta waan soo marnay, wax na qaado ma lahan, waxaa na qaada calanka buluugga ah ee shanta gees leh, waxaana u baahan nahay in aan is-ogolaanno oo midnimo la nimaado. Adduunka haddii aad doontaan in aad u safartaan qaarkiin waxaa laga yaabaa in ay idinka xigto in aad tikidh kaliya goosataan, halka aniga aaney sidaas iigu sahlaneyn, laakin mar walba waxaa tihiin Somali-British, meel kasta oo aad tagtaanna waxaan tihiin Soomaali"ayuu yiri madaxweynaha oo Soomaalida u iftiiminayay in ay dal leeyihiin uuna wax u qabasho ka sugayo.
Aqoonsiga Dowladda Soomaaliya ayuu ka hadlay Madaxweynaha, wuxuuna sheegay in wanaagga iyo aqoonsiga ay Soomaaliya heshay aysan cid gaar ah dhibaato ku ahayn. “Aqoonsiga Dowladda Soomaaliyeed heshay waa heybad iyo sharaf u soo hoyatay dadka Soomaaliyeed deegaan kasta oo ay degan yihiin, aqoonsigaasna ma noqon doono mid dad gaar ah lagu riixo oo culeys diblumaasiyadeed lagu saarayo. walaalaha Soomaaliyeedna waxaan leenahay na siiya fursad aan idinku soo gaarsiinno wanaagga aqoonsiga dowladda Soomaaliya ay heshay ” ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo la gunaanadkii xafladda la guddoonsiiyay gunaanado ay soo diyaariyeen Dhaqdhaqaaqa la-dagaalanka qabyaaladda, kuwaasi oo ay ku qornaayeen hal-ku-dhigyo ay ka mid ahaayeen QABYAALAD MAYA QORI MAYA, QARAN HAA QALIN HAA.
Ugu dambeyntiina, Madaxweynaha Soomaaliya waxaa uu kulan la qaadan doonaa Maalinta Isniinta ah ee soo socota Ra’iisal Wasaaraha Britain Mr. David Cameron oo martiqaad rasmi ah u fidiyay Madaxweynaha Soomaaliya.
Ibraahim Baafo iyo Salaad Xiis, Hiiraan Online